Covid-19 ကာကွယ်ဆေးကိုမဖြစ်မနေလိုအပ်ပါကသင်သောက်သင့်သလားသို့မဟုတ်ငြင်းဆန်သင့်သလား။ ဘာလုပ်မလဲ? : Martin Vrijland
Covid-19 ကာကွယ်ဆေးကိုမဖြစ်မနေလိုအပ်ပါကသင်သောက်သင့်သလားသို့မဟုတ်ငြင်းဆန်သင့်သလား။ ဘာလုပ်မလဲ?
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	မေလ 14 2020 အပေါ်	• 45 မှတ်ချက်
တဖြည်းဖြည်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအစိုးရများသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးအပေါ်ထာဝရတည်တံ့သောအပြောင်းအလဲများပြုလုပ်လိုကြောင်းလူအများပိုမိုတွေ့မြင်လာကြသည်။ “ အသိဉာဏ်ရှိသောသော့ပိတ်ဆို့မှု” ကိုတဖြည်းဖြည်းအမြဲတမ်းတစ်ခုအဖြစ်အသွင်ပြောင်းပြီးသင်၏လွတ်လပ်မှုကိုပြန်လည်ဝယ်ယူရန်လိုသည်။ ပုံမှန်စံသစ်သည်လူ့အဖွဲ့အစည်း၏တစ်မီတာနှင့်တစ်ဝက်ခန့်ဖြစ်လာပြီးသင်ကိုယ်တိုင်ယင်းအတွက်ပေးရသည်။
မီတာတစ်ဝက်ခန့်သင့်ကုမ္ပဏီကိုမည်သို့ဖွဲ့စည်းရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်အကြံပေးရန်စျေးကြီးသောအတိုင်ပင်ခံများကိုသင်ငှားရမ်းနိုင်သည်။ သင်စျေးနှုန်းအပေါ်မှီခိုနိုင်သည်။ သင်၏တိုင်းတာမှုများအတွက်တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရယူရန်နှင့်ဖောက်သည်အတွက်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ရန်သင်လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်တစ်စုံတစ် ဦး သည်ထိုတာ ၀ န်ယူမှုရှိသောမီတာနှင့်တစ်ဝက်ကိုချောင်းဆိုးရန်နှင့်ဝင်ငွေကျဆင်းခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်လာမည့် covid-19 ကာကွယ်ဆေးသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။
ထိုကဲ့သို့သောကာကွယ်ဆေးအားနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်စမ်းသပ်ပြီး၊ မပြီးသည်နှင့်မတူသည်မှာလူ့အဖွဲ့အစည်း၏မီတာတစ်ဝက်ခန့်သောကိရိယာကိုကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဟူသောမေးခွန်းနှင့်ထပ်တူကျသည်။ အစိုးရများကဆန့်ကျင်။ ဆန္ဒပြသူများကိုတကယ်မသွားပါ နားထောင်ပါ
နည်းပညာများကိုထိုတိုင်းတာမှုများကိုစောင့်ကြည့်ရန်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ ငါပြီးသားကြောင်းဟောကိန်းထုတ် 2019 ၌ငါ၏စာအုပ် ငါပြီးသားမကြာသေးမီနှစ်များစွာသောဆောင်းပါးတွေအတွက်ခန့်မှန်းပါတယ်။ ဒီနည်းပညာနှင့်ကြီးမားသောဒေတာများကိုရိုးရှင်းစွာတွန်းပို့လိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကုမ္ပဏီများစွာသည်နောက်တဖန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောဝင်ငွေကိုရနိုင်သည်။ ယခုအချိန်တွင်လည်းများစွာသောသူတို့သည်အိုင်စီတီဖြေရှင်းနည်းများကိုပေးသောကုမ္ပဏီကြီးများအတွက်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အိမ်များကိုဆက်လက်ပေးဆပ်ရန်နှင့်မိသားစုကိုထိန်းသိမ်းရန်အစိုးရအေဂျင်စီများအတွက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ထိုလူများကတစ်ခုခုသည်မှားသည်ကိုမြင်ကောင်းမြင်ကြလိမ့်မည်။ သို့သော်ရွေးချယ်ရန်လိုလာသောအခါအများစုသည် ၀ င်ငွေကိုအာမခံရန်အတွက်ကွေးကောက်ခြင်းကိုရွေးချယ်ကြသည်။
ဒီလူ့အဖွဲ့အစည်းအသစ်ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုငါတို့အားလုံးသိပြီ။ မီဒီယာနှင့်ပြည်နယ်များအနေဖြင့်ရောင်းရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့်၎င်းကိုစတင်မိတ်ဆက်ပုံမှာတစ်ဆင့်ချင်းစီဖြစ်သည်။ ထုများက၎င်းတို့အား coronavirus ကိုထိန်းချုပ်ရန်လိုအပ်သောအဆင့်များဖြစ်သည်ဟုဆက်လက်ယုံကြည်စေရန်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို 'ခါးပတ်ကိုတင်းကျပ်' ကနေ 'ကျောက်ကပ်ရုံကြကုန်အံ့' မှလှိုင်းများသို့သွားပါလိမ့်မယ်, ပြီးတော့လာမယ့်လှိုင်းလာ။ မီဒီယာ, ကျွမ်းကျင်သူများ (ကိန်းဂဏန်းများ၏ထုတ်လုပ်မှု) နှင့်နိုင်ငံရေး, နောက်တစ်ဝက်၏နိဒါန်း၏နိဒါန်းအရာပြီးနောက်တစ် ဦး နှင့်တစ်နှစ်ခွဲမီတာနှင့်ရွှေ့ဖို့အနည်းငယ်ပိုအခန်းတစ်ခန်း, Corona ဗိုင်းရပ်စ်၏ပြန်လည်ရှင်သန်မှုဖို့အသုံးပြုတဲ့ကာလပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ကိုပြသပါလိမ့်မယ်လူများကအထုပ်များ နှုတ်ဆက်ပြီးလိမ့်မည်။
မီဒီယာမှစာဖတ်သူများသည်များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကစားပုံနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေလေ့ရှိသည်။ ကာကွယ်ဆေးများသည်မည်မျှအန္တရာယ်ရှိကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့အားအကျိုးသက်ရောက်ရန် 5G ကိုမည်သို့အသုံးပြုနိုင်သည်၊ Microsoft မူပိုင်ခွင့်များကဒီဂျစ်တယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးလက်မှတ်ကိုပေးသည်၊ ဘီလ်ဂိတ်စ်သည်မီဒီယာနှင့်ကာကွယ်ဆေးလုပ်ငန်းများတွင်မည်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်၊ အက်ပလီကေးရှင်းများကကျွန်ုပ်တို့ကိုမည်သို့ကူညီနိုင်မည်ကိုနက်နက်နဲနဲလေ့လာဆန်းစစ်လိုသည်။ စောင့်ကြည့်ဖို့။ ကျွန်ုပ်တို့အင်တာနက်ကိုမည်သို့မောင်းနှင်နေကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုအလွန်လိုချင်သည်၊ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားသူများအားကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းခရီးတွင်မည်သည့်အန္တရာယ်ကြုံတွေ့ရမည်ကိုလှုပ်ခါနိုင်သည်။
ဒါကအရမ်းကိုအရေးကြီးတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းဘာအန္တရာယ်တွေကြုံနေရတယ်ဆိုတာကိုမင်းမသိဘူးဆိုရင်အချိန်မဖြုန်းဘူး။ သို့သော်နောက်တစ်ဆင့်ရှိရမည်။ ကျနော်တို့ဖြေရှင်းချက်အတူတက်လာရန်ရှိသည်။
၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ငွေမရှိသောလူ့အဖွဲ့အစည်း၊ အက်ပလီကေးရှင်းများ၊ ကင်မရာများနှင့်ကြီးမားသောဒေတာများရှိသည့်လူ့အဖွဲ့အစည်းသို့ကျွန်ုပ်တို့မည်ကဲ့သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်ကိုဆောင်းပါးများစွာဖတ်ပြီးဖြစ်သည်။ မည်သည့်နေရာတွင်နေထိုင်သည်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အပူချိန်မှန်ကန်သင့်မသင့်ကိုသိရှိသည်။ 19) နှင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်အပြန်အလှန်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူ။ နောက်တစ်ဆင့်မှာဤအချက်အလက်အားလုံးကိုရမှတ်စနစ်တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်သည်။ လုံလောက်သောရမှတ်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေအပြင်၌ဖြစ်စေ၊ ရထားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လေယာဉ်ဖြင့်ဖြစ်စေသွားနိုင်သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ယခုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ ထိုအချက်အလက်များ၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဒစ်ဂျစ်တယ်အမှတ်အသားနှင့်သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘဏ်လက်ကျန်ငွေဆက်စပ်မှုသည်ဇာတ်လမ်းပြီးဆုံးသည်။
ငါတို့ကိုကွန်ယက်တစ်ခုထဲသို့မောင်းနှင်နေသည်။ တရုတ်သည်သင်အားပြည်နယ်တစ်ခုအနေနှင့်လူတို့အား၎င်းအားလိုက်နာစေနိုင်ပုံကိုဥပမာပေးသည်။ အတိုက်အခံပြုသူတစ် ဦး ချင်းကိုမည်သို့ဖယ်ရှားပစ်သည်ကိုလည်းတရုတ်ကပြသသည်။ ဒါကထိုကဲ့သို့သောစနစ်၏အလိုအလျောက်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတွင်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိများစွာသောသူတို့သည်စနစ်၏အစိတ်အပိုင်းများအတွက်အလုပ်လုပ်ကြသောကြောင့်၊ သင့်တွင်အိုင်စီတီတွင်အလုပ်ရှိပြီးဒေတာဗေ့စ်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (သို့) ကင်မရာစနစ်များကိုထောက်ပံ့သည်ဆိုပါကသင်သည်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိသို့မဟုတ်ရဲအရာရှိတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်သင်၏ဝင်ငွေကိုရွေးချယ်ပါ။ ဒါကသွားပုံပါပဲ။
ဒါဟာပြောခြင်းဟာထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်မှု "အဲဒီနောက်ငါစမတ်ဖုန်းကိုစွန့်ပစ်လိုက်တယ်၊ အဲဒါကြောင့်ငါ system ထဲကနေထွက်သွားတယ်" digiD မပါဘဲ (ကုမ္ပဏီများအတွက်) eHerkenning မပါဘဲလူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါ ၀ င်မှုသည်မဖြစ်နိုင်သလောက်ဖြစ်လာသည့်အချိန်ကိုကျွန်ုပ်တို့သွားသည်။ Corona နည်းပညာအသစ်သည်လည်းအလားတူဖြစ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်၏စမတ်ဖုန်းကိုလွှင့်ပစ်လိုက်လျှင်စူပါမားကတ်ထဲမ ၀ င်တော့ပါ။
ဒါကိုမှလာမှာလား တဆင့်ပြီးတဆင့်ဒါဖြစ်နိုင်သည်။ ပြီးတော့သင့်မှာကိုယ်ပိုင်ဥယျာဉ်ခြံရှိမှသာရှင်သန်နိုင်မှာပါ။ ပြီးတော့သင်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲဒီကနေသင့်ရဲ့မျိုးစေ့တွေရဖို့လိုတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီ့ဖူလုံမှုဟာရေရှည်မှာလည်းတားမြစ်ခံရလိမ့်မယ်။
နောက်အဆင့်မှာကာကွယ်ဆေးမထိုးပါကအများပြည်သူပိုင်ဒေသများသို့ ၀ င်ခွင့်မပြုတော့ပါ။ ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အချက်အလက်တွေကလည်းဒီကိစ္စမှာအဓိကပါလိမ့်မယ်။ သင့်အပလီကေးရှင်းကသင့်တွင်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားပြီဟုပြောပါကစူပါမားကတ်ဝင်ပေါက်တံခါးဝသည်သင့်အားဝင်ခွင့်ပေးပါလိမ့်မည်။ မဟုတ်ရင်တော့မဟုတ်ဘူး။ နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်၊ ထို app ကိုသင့်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်ဒီဂျစ်တယ်လက္ခဏာဖြင့်အစားထိုးလိမ့်မည်။ သင်၏ဘဏ်ငွေလက်ကျန်သည်ဤအရာအားလုံးနှင့်ဆက်နွယ်မှသာပြည့်စုံလိမ့်မည်။ သင်ဟာ“ တောရိုင်း” တွင်နေထိုင်ရန်ရွေးချယ်ခြင်း မှလွဲ၍ မကြာမီတွင်လွတ်မြောက်လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းများစွာသောသူတို့အတွက်မူဝေးလံသောတံတားတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။
ငါတို့လိုချင်တဲ့ကြွေးကြော်သံ၊ ငါတို့ရှိသမျှသည်မလိုချင်သောကြောင့်အော်ဟစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ကန္တာရ၌ငိုကြွေးမြည်တမ်း၏။ အများစုသည် 'စနစ်' ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ထို့ကြောင့်စဉ်းစားရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။ အကယ်၍ မင်းကသူတို့ကိုမနိုင်ရင်၊
ကျွန်ုပ်တို့သည် 'စနစ်' အတွက်အလုပ်လုပ်သူများမှလည်းလက်ခံနိုင်သည့်ခိုင်မာသောဖြေရှင်းချက်များနှင့်အတူပေါ်ထွက်လာရမည်။ လူတွေဟာသေချာမှုတွေကိုမဆုံးရှုံးနိုင်အောင်သေချာစေတဲ့ခိုင်လုံတဲ့၊ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ဖြေရှင်းချက်တွေပေါ်လာရမယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အထက်မှချမှတ်ထားသောဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်လုံးဝမှီခိုနေရသည်။ လက်ရှိနုိုင်ငံရေးစနစ်ကထိုဆုံးဖြတ်ချက်များကိုမည်သည့်ပုံစံနှင့်မျှမပါဘဲကျွန်ုပ်တို့ကိုလက်ခံစေသည်။ ဒါကကွဲပြားခြားနားလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ အဲဒါကွဲပြားခြားနားရမယ်။
အခွင့်အလမ်းရှိတယ်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကိုဇောက်ထိုးပြောင်းလဲရန်မလိုဘဲယနေ့ခေတ်တူညီသောနည်းပညာဖြင့်အရာဝတ္ထုများကိုအခြေခံကျကျပြောင်းလဲရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ ၎င်းသည်အဓိကလူကြိုက်များသောလူထုအုံကြွမှုသို့မဟုတ်တော်လှန်ရေးမလိုအပ်ပါ။ လူတိုင်းကသူတို့လုပ်သမျှကိုဆက်လုပ်နိုင်သည်။
ပြောင်းလဲစေသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာသည်ဆုံးဖြတ်ချက်တည်ဆောက်ပုံဖြစ်သည်။ ၀ န်ကြီးဌာနများနှင့်တာဝန်ရှိသူများသည်ပြည်သူလူထု၏ချက်ချင်းသဘောတူညီချက်မရဘဲဥပဒေများကိုတွန်းအားပေးနေပြီးပြည်သူလူထုကိုသတင်းပို့ရမည်။ ၀ န်ကြီးများကိုပြည်သူ့ကိုယ်စားပြုတိုက်ရိုက်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသောကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်အစားထိုးသင့်သည်။
ဤအရာအားလုံးကိုတိုက်ရိုက်ဒီမိုကရေစီနိယာမအားဖြင့်ရနိုင်သည်။ တိုက်ရိုက်ဒီမိုကရေစီတွင်သင်၏ကိုယ်စားလှယ်များကိုအွန်လိုင်းမှရွေးချယ်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုသင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ် ဦး ဖြစ်လာနိုင်ပြီးမဲဆန္ဒပေးမှုစနစ်သည်ထောက်ခံမှုအတွက်ရွေးချယ်မှုနှင့်တိုးတက်မှုကိုသေချာစေသည်။ ၎င်းသည် Holland's Got Talent နှင့်အခြားတီဗွီအစီအစဉ်များကဲ့သို့သောမဲပေးစနစ်များနှင့်တူသည်။ နည်းပညာရှိနေပြီးဖြစ်နိုင်ခြေများရှိနေပြီး၎င်းသည်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။
တိုက်ရိုက်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံအမတ်များသည်ဥပဒေများကိုရိုးရှင်းစေပြီးပြည်သူလူထုအားအတည်ပြုခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများပြုလုပ်သင့်သည်။ ဥပဒေထောင်ပေါင်းများစွာမှသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုသို့၊ အရေအတွက်အရအရည်အသွေးအထိဖြစ်သည်။ တိုက်ရိုက်လူထုပါဝင်မှု။
မဖြစ်မနေကာကွယ်ဆေးထိုးဥပဒေများကကျွန်ုပ်တို့အားကာကွယ်ဆေးကိုယူရန်သို့မဟုတ်ထောင်သို့သွားရန်ရွေးချယ်ခွင့်ပြုသည်အထိစောင့်ဆိုင်းနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်အရှိန်အဟုန်ကိုရယူနိုင်သည်။ အပြောင်းအလဲကိုဖော်ဆောင်ရန်ဤအကျပ်အတည်းကိုကျွန်ုပ်တို့သိမ်းယူရမည်။ ငါတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုပြောင်းပါ။ လတ်တလောတွင်ဒီမိုကရေစီသည်တိုက်ရိုက်အာဏာဖွဲ့စည်းပုံကိုအွန်လိုင်းမဲပေးစနစ်ဖြင့်အစားထိုးနိုင်သည်။
ယခုဤအရာအတွက်ထောက်ခံမှုဖန်တီးရန်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအခွင့်အလမ်းထဲနှစ်မြုပ်ပါ၊ စဉ်းစားပါ၊ မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုဖတ်ပါ။ အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီ။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးအသနားခံလွှာကိုလက်မှတ်ထိုးပါ။
အပြောင်းအလဲကြီးအတွက်အချိန်နှင့်ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုအတွက်အချိန် - အသနားခံလွှာကိုလက်မှတ်ထိုးပါ
Coronavirus covid-19 ပိတ်ခြင်းသည်measuresပြီ ၆ ရက်ကိုတိုးချဲ့ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ပိုမိုလေးလံစေသည်
ကာကွယ်ဆေးနည်းပညာပိုင်းသင့်ရဲ့ DNA ကိုစိတ်ကြိုက်အသုံးပြုနိုင်မလဲ
လူတိုင်းကိုခေါ်ခြင်း: သူပုန်! Enforcers - သင်၏လူမဆန်သောဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာအပြုအမူကိုရပ်တန့်ပါ။
Tags:: ထက်, apps များ, ကြီးမားသော, Covid-19, ဒေတာ, ဒီမိုကရေစီ, တိုက်ရိုက်, er, အထူးပြုလုပ်ထားသော, fvvd, ဖြစ်ပျက်, ငါငြင်းတယ်, အွန်လိုင်း, မဲပေး, နည်းပညာ, ကာကွယ်ဆေး, ကြောကျထိုးခွငျး, ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းတာဝန်, ကတိကဝတ်, Wat, ငြင်းဆန်, ငြင်းဆန်, တရားဉပဒေပြုခြင်း
14 မှ 2020 မေလ 12: 22
14 မှ 2020 မေလ 13: 16
ဒါပေမယ့်အခမဲ့ဖြစ်တဲ့ Martin ကတော့ Jan Peter ဟာရှေ့ဆောင်တစ်ယောက်ပါ
၀ န်ကြီးချုပ်ဟောင်းဘော်လင်နန်ဒီသည်လူတိုင်းအတွက်အခမဲ့ Corona ကာကွယ်ဆေးကိုလိုချင်သည်
14 မှ 2020 မေလ 13: 26
အခမဲ့ = အခွန်အိုးကနေထို့ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာအခွန်တိုးမှတဆင့် = အခမဲ့မဟုတ်ပါဘူး
17 မှ 2020 မေလ 15: 23
ဒီမဒီရူဒီဒစ်ကြောင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အလုပ်ပြုတ်မှုဖြစ်ခဲ့လျှင်မကြာမီ Madurodam တွင်လာမည်ကိုအာမခံသည်၊ နှုတ်သီး၏အစက်သည်ဖခင်အတွက်ဖြစ်သည်။ ညစ်ပတ်ပေရေသောအလုပ်များလုပ်ရန်လုံလောက်လွန်းသော ...
Michael Gove က Coronavirus အဆိပ် ၁၇၀၀၀ ကျော်ကိုယခုအချိန်တွင်စုဆောင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ပစ်မှတ် ၁၈၀၀၀ ကိုသာရှက်ခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်ကန ဦး သုံးလသာငှားရမ်းခြင်းခံရသည်ဟုဆိုသည်။
14 မှ 2020 မေလ 13: 23
Covid သည်ကာကွယ်ဆေးထိုးလက်မှတ် (၂၀၂၀) ကိုရည်ညွှန်းသည်။
14 မှ 2020 မေလ 13: 33
14 မှ 2020 မေလ 14: 41
Covid ရဲ့နောက်ကွယ်က ၁၉ ကစာလုံးတွေကိုဂဏန်းနဲ့ပြန်ဆိုမယ်ဆိုရင် AI ကိုဆိုလိုတယ်။ ဒီတော့ကာကွယ်ဆေး၏အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အတုထောက်လှမ်းရေး၏လက်မှတ်။
အဆိုပါခိုးယူဒေတာအားလုံးအဆုံးသတ်ဘယ်မှာကျနော်တို့ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်, သင်တန်း၏ Palantir စနစ်! လမ်းကြောင်းနဲ့သဲလွန်စ
14 မှ 2020 မေလ 15: 33
အတိအကျ @riffian !!! AI ကိုအချက်အလက်တိုက်ကျွေးဖို့လိုတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် NHS COVID ၏ကြီးမားသောအချက်အလက်သဘောတူညီချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ချက်ချင်းအဖြေများလိုအပ်သည်
အဘယ်ကြောင့်ယူကေအစိုးရသည်၎င်း၏ "မကြုံစဖူး" အချက်အလက်များကိုအမေရိကန်နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးများသို့လွှဲပြောင်းပေးမှုကိုအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ရန်ငြင်းဆန်နေသနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့အဖြေမရလျှင်၎င်းတို့ကိုတရားရုံးတွင်ရှာနိုင်သည်။
14 မှ 2020 မေလ 14: 58
ကောင်းတဲ့ဗီဒီယို၊ အထူးသဖြင့်နောက်ဆုံးကတော့ငါ AM နဲ့အဆုံးသတ်ဖြစ်တယ်။ မုန်းတီးမှုများသည်မကြာခဏဆိုသလိုစကားလုံးများကိုလှုပ်စေသည်။
ဤတွင်နောက်တဖန်ရုံသစ်ကိုစာဖတ်သူများအဘို့။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ပိုပိုပြီးဆက်ပြောသည်နေကြသည်။ လူတွေကလည်းမာတင်ကိုနည်းနည်းပဲကူညီပေးတယ်။ သူ၏အသံသည်စိတ်ချရသော၊ မင်းဒါကိုတခြားဘယ်နေရာမှာမှမဖတ်ဘူး သူ၏ site ကိုလေထဲတွင်တက်ထားရမည်။ သူ၏ site ပေါ်ရှိ Ddos တိုက်ခိုက်ခြင်းအကြောင်းသူ၏ဆောင်းပါးကိုကြည့်ပါ
၎င်းသည် Jensen 33 ၏ဖျက်ထားသည့်ဗီဒီယိုထက်များစွာ ပို၍ ပြင်းထန်သည်။ ၎င်းကို Yt နှင့်သဘောတူခဲ့သည်။ မိမိအရှပ်အင်္ကျီရောင်းချခြင်းနှင့်အတူ, ထို့နောက်အားလုံးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုပြောပါ။ သူဟာ Vondelpark မှာနေတယ်၊ ​​ရေလိုပိုက်ဆံလည်းရှိတယ်။ ငါ့အမှုကိုငါရပ်နေပြီ။
ဒီနေရာမှာဒီရိုက်ချက်ကိုမင်းဘာကြောင့်မရိုက်သင့်တာလဲ။ ဒီ site မှာဒီလိုမျိုးလေ့လာပြီးနံပါတ်တွေသိလာရင် ဤနံပါတ်များတွင်ဖော်ပြထားသောအရာအားလုံးကိုသင်ယုံသင့်သို့မဟုတ်မယုံသင့်ကြောင်းသင်သိပါသလား။ ထို့အပြင်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့မ ၀ င်ပါနှင့်။
14 မှ 2020 မေလ 18: 34
သဘောတူတယ် မာတင်ရေးသားခဲ့သည်နှင့်အဆိုပြုထားသမျှကိုရှာမတွေ့နိုင်ပါ၊ တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းသည်အလွန်အမင်းလွန်ကဲစွာ (သို့) လက်တွေ့မကျဟုတွေ့ရှိရသော်လည်း၎င်းသည်အတော်အတန်ထူးခြားသည့်အသံဖြင့်သူသည်နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောကြားခွင့်၏ 'ကျောက်မီးသွေးတွင်းရှိ Canary' ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤ site သည်ဆက်လက်လည်ပတ်နေရမည်ဖြစ်ပြီးအမှန်မှာ visitors ည့်သည်များနှင့်ထောက်ခံသူများ ပို၍ များလေလေဖြစ်သည်။
အထက်ပါဆောင်းပါးကိုကျွန်ုပ်သဘောတူနိုင်သည်၊ သို့သော်အဆိုပြုထားသောအပြောင်းအလဲများကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာပြန့်နှံ့သင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည် (အကယ်၍ သင်တတ်နိုင်သမျှများများနှင့်အခြားနိုင်ငံများသို့ဖြစ်နိုင်လျှင်) ပြည်သူ့ထိုကဲ့သို့သောအကြီးအကျယ်အလှည့်အဘို့အ ဦး ဆုံး "မှည့်သော" လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်များစွာသောသူတို့သည်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ကြလိမ့်မည်၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ ပရမ်းပတာဖြစ်ခြင်း၊
wmb ကိုဆွီဒင်ဆောင်းတွင်း -၃၀ ဒီဂရီတွင်အေးခဲနေသောတစ်စုံတစ် ဦး နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ အကယ်၍ သင်ကရေပူကိုချက်ချင်းရေထဲထည့်လိုက်လျှင်၊ ၎င်းသည်အလွန်တဖြည်းဖြည်းဖြစ်ရန်လိုအပ်ပြီးလူအများစုနှင့်လည်းအတူတူဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုလုပ်ရန် ၁၀ နှစ်ပေးပါ။ (လက်ရှိစစ်အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကိုအမြဲတမ်းရဲတပ်ဖွဲ့အဖြစ်သို့မရောက်ရှိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင် ၁၀ နှစ်မရှိသည်မှာကြောက်သော်လည်း)
14 မှ 2020 မေလ 20: 33
ငါသဘောကျလွန်းနေသော '' လက်တွေ့မ 'နှင့်' အစွန်းရောက် '၏သေံအလွန်မသင့်လျော်ကိုရှာပါ။ အကယ်၍ ပါတီတစ်ခုသည်လက်တွေ့မကျ။ အလွန်အလုပ်များလွန်းပါကလက်ရှိသော့ခတ်ထားသောအစိုးရဖြစ်သည်။
ဒီမှာ Xander ၏ထင်မြင်ချက်သည်တိုင်းတာသည့်အရာမဟုတ်သကဲ့သို့သင်၏ဘုရားသခင် X ၏ဖြောင့်မတ်သောစီရင်ချက်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့လည်းမှီခိုနေသည်မဟုတ်ပါ။ ဒီလိုဝေဖန်မှုမျိုးကိုစွန့်လွှတ်ပြီးအရေးယူဖို့အချိန်ရောက်ပြီ။ လုပ်ခြင်းအားဖြင့်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်လိမ့်မည်။
fvvd.nl တွင်အဆိုပြုထားသောစနစ်သစ်ကိုလအနည်းငယ်အတွင်းတည်ဆောက်သင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်အခိုင်အမာယုံကြည်သည်။ ဖြုန်းတီးဖို့အချိန်မရှိဘူး။
ငါသည်သင်တို့၏မှတ်ချက်များကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ငြင်းပယ်။ နောက်ထပ်လအနည်းငယ်စောင့်ရ ဦး မည်ဆိုပါကလက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့သည်လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးနှင့်မီတာခွဲခွဲအသွင်ပြောင်းလိုက်ပြီဖြစ်ရာကျွန်ုပ်တို့အားအာဏာရှင်ထိန်းချုပ်မှုကွန်ယက်ထဲ၌နေရာချထားသည့်နည်းပညာဆိုင်ရာနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကိုကျင့်သုံးလျက်ရှိသည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်သည်မှာ၎င်းကိုရှည်လျားသောလမ်းကြောင်းပေါ်သို့မတင်လိုက်ပါနှင့်၊ ၎င်းကိုအစွန်းရောက်။ လက်တွေ့မကျပါစေနှင့်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းနှင့်ဒီဂျစ်တယ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များကကျွန်ုပ်တို့အားအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောနေရာများသို့တိုင်ကြားခြင်းနှင့်ရေးသားခြင်းသည်အလွန်ပြင်းထန်ပြီးအလွန်လက်တွေ့ကျသည်။
၎င်းသည်လူတို့၏ရင့်ကျက်မှုပေါ်တွင်တင်ခြင်းသည်သတ္တိရှိရှိဖြစ်သည်။ လူများသည်ဤပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများအတွက်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးကြပါ။ ယခုအခါအစိုးရအနေဖြင့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း 'လက်တွေ့မကျ' နှင့် 'အစွန်းရောက်' သောအစီအမံများကိုတွန်းအားပေးနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။
ဒါကြောင့်ခင်ဗျားရဲ့ဝေဖန်မှုကို NO လို့ကြမ်းတမ်းစွာပြောပြီးလူတွေကိုဖုန်းခေါ်ခိုင်းတာပါ NOW ကအရေးယူပါ။ ၁ မိနစ်ကနေ ၁၂ အထိရတယ်၊ ၁၀ နှစ်လောက်မစောင့်နိုင်ဘူး။
၀ ဘ်ဆိုဒ်၏မေးခွန်းနှင့်အဖြေကဏ္sectionမှမေးခွန်းများကိုလည်းသင်မေးနိုင်သည်။ https://www.fvvd.nl/qa/
14 မှ 2020 မေလ 22: 14
15 မှ 2020 မေလ 07: 03
15 မှ 2020 မေလ 16: 01
ကျွန်ုပ် Xander သည်အလွန်အကျူးသံသယရှိစရာကောင်းသောသံသယရှိနေသော်ငြား Xander အားသင်၏တုန့်ပြန်မှုမှာသပ်သပ်ရပ်ရပ်လွန်းလှသည်။ ငါရှင်းပြဖို့မသွားဘူး။ ပုံမှန်စာဖတ်သူကိုငါဆိုလိုတာကသိလိမ့်မည်။
14 မှ 2020 မေလ 13: 37
14 မှ 2020 မေလ 15: 01
ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး၊ တီဗွီမဖတ်တတ်ဘူး၊ ကလစ်ရန်အမှန်တကယ်အလွန်မရေ။ ပြီးတော့ဒီတီးဝိုင်းရဲ့ပရိသတ်ပဲ။ ရှေးကာလ၌။
14 မှ 2020 မေလ 13: 56
ပိုမိုခန့်မှန်းရလွယ်သောပရိုဂရမ်များ၊ script ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် Dead Zone - PLAGUE စီးရီးများတွင်ထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်သည်
14 မှ 2020 မေလ 15: 47
Corona (ra33oon) အကြောင်းပင်ပြောဆိုခဲ့သည်မှာထူးခြားသောဗီဒီယိုဖြစ်သည်။ ၁၉၉၃ မှသံသယရှိသည့်ဒေါက်ဂလပ်စ်နှင့်အတူပြုတ်ကျခြင်းသည်မျက်နှာနှင့်ကွဲပြားသည်။
14 မှ 2020 မေလ 14: 06
လူလတ်တန်းစား / အတန်းအစားကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်တစ်နှစ်ငွေကြေးလုံး ၀ ချထားမည်ဖြစ်သောကြောင့်မကြာမီသူတို့သည်သိုးသူငယ်ကဲ့သို့ဖခင်နိုင်ငံတော်သို့လွှဲပြောင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။
14 မှ 2020 မေလ 15: 09
အမှန်ပါပဲ ဤနည်းလူတိုင်းလုံးဝမှီခိုဖြစ်လာသည်။ သိမ်းဆည်းထားခြင်းကြောင့်ဝေဖန်မှုများကိုမစဉ်းစားတော့ပါ။ မင်းသာကောင်းကင်ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ငါထင်တဲ့နည်းနဲ့ကယ်တင်ခဲ့တယ်။ ထို့နောက်သင်၏ကယ်တင်ရှင်သည်သင်နှင့်သင်၏မိသားစုကိုတွင်းနက်ထဲသို့တမင်တကာတွန်းပို့ပေးသူဖြစ်သည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကကန ဦး ကွဲပြားခြားနားမြင်လိမ့်မည်။ သိပ်နောက်မကျမှီတိုင်အောင်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုစမ်းသပ်မှုမရှိသောနိုင်ငံများရှိလူများကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသားဖြစ်လိမ့်မည်။ ပုံမှန်သံသယရှိသူများထံမှလာပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစီစဉ်ပေးသည်။ ဤကာကွယ်ဆေးသည်သင့်အားမည်သည့်နည်းနှင့်မဆိုထိခိုက်စေသင့်သလား။ အဲဒီအစီအစဉ်ကတကယ်တော့ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးကိုပြောပြတယ်။
14 မှ 2020 မေလ 15: 28
သိုး၏အဝတ်အစားရှိအဲရစ်ရှမစ်တွင်ရှိသည့်အခြားဝံပုလွေတစ်ကောင်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်သံသယရှိသူအားလုံးသည်ဤအဆုံးစွန်သောကျွန်ပြုမှုလုပ်ငန်းတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေကြသည်။ ထို့အပြင်သူတို့သည်အလုပ်များနေစဉ်တွင်သူတို့၏အစီအစဉ်တွင်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကိုလည်းပါ ၀ င်သည်
ဆက်သွယ်ရန် Tracing Group ကိုဆိုးရော့စ်နှင့်ဂိတ်စ်တို့ရန်ပုံငွေချထားသည်မှာချယ်လ်ဆီးကလင်တန်ဖြစ်သည်
'လူများသည်မကောင်းမှုပြုခြင်းကိုနှစ်သက်ကြ' သောcorporရာမကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ 'ကျေးဇူးတင်သင့်သည်' (ဤ FASCISM ဟုကျွန်ုပ်တို့ခေါ်သည်)
14 မှ 2020 မေလ 15: 37
https://www.cbsnews.com/news/trump-economic-club-speech-live-stream-president-trump-at-the-new-york-economic-club-today-2019-11-12/ (Trump, ပြproblemနာရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Q bullshit ကိုမေ့လိုက်ပါ။ အစီအစဉ်ကိုယုံကြည်ပါ၊ သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်ပါ)
14 မှ 2020 မေလ 17: 20
Trump ကာကွယ်ဆေး၏မျက်နှာသာအတွက်ဖြစ်ပါသည်, အ Q လှုပ်ရှားမှုကတုံ့ပြန်ပုံကိုကြည့်ပါ။
15 မှ 2020 မေလ 16: 41
ထုတ်ဖော်: သတင်းထောက်တွေကိုသတင်းစာအတွင်းရေးမှူးလှုပ်သော Trump ၏ကူးစက်ရောဂါ 'အစီအစဉ်' သည်သူမကိုင်ဆောင်ထားသည့်လှိုင်းထန်နေသောအစီရင်ခံစာတွင် - ဆေးဝါးပြတ်လပ်မှု၊ ရန်ပုံငွေမလုံလောက်ခြင်းနှင့်ဖက်ဒရယ်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများမဖြစ်ပွားမီလများစွာကသတိပေးခဲ့သည်
20 မှ 2020 မေလ 18: 50
နယူးယော့“ SMART CITIES” အတွက် Eric Schmidt ၏တွန်းအားနှင့် MEDIA IGNORES သည်RAသရေလအမျိုးနှင့်ဆက်နွယ်မှု
14 မှ 2020 မေလ 15: 46
သူတို့ကဒီကစားနည်းကိုဘယ်လောက်လိမ္မာပါးနပ်စွာဒီမှာကြည့်ပါ။ သူတို့ကစာသားကသူတို့ဘာလုပ်တော့မယ်ဆိုတာပြတယ်။ မိသားစုမှကလေးများကိုဖတ်ပါ။ ကျန်းမာရေးအသွင်အပြင်အောက်မှာ, သင် quarantine များအတွက်2ရေချိုးခန်းရှိသည်မဟုတ်သောကြောင့်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူ့ကိုမှဆန့်ကျင်နေတယ်လို့ဘယ်သူပြောရမလဲ။ အလွန်ညံ့ဖျင်းသောသရုပ်ဆောင်ပေးသည်။ ဒါပေမယ့်မင်းကတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်စောင့်ကြည့်ဖို့ခေါ်တဲ့စာပို့တယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကသင်၏အဆက်အသွယ်ခြေရာကောက်နံပါတ်ရှိသည်။ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့၊ သင့်ကလေးသည်နောက်တဖန်သင့်ကိုနောက်တဖန်မတွေ့ရဖွယ်ရှိပြီး Covid မှမသေခဲ့ပါ။ ၉၀ နှင့် ၃၃ ကိုဖတ်ပါ။ ၉၊ ၃၃ ကိုဖတ်ပါ။ ပြီးတော့သင့်မှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကိုလွှင့်ပစ်ပါ။ အမေရိကကိုလုပ်ပါ
14 မှ 2020 မေလ 16: 31
14 မှ 2020 မေလ 21: 56
15 မှ 2020 မေလ 03: 25
သူတို့ရဲ့ဘ ၀ မှာမဲပေးသူတိုင်းဒီအသနားခံစာကိုလက်မှတ်ထိုးသင့်တယ်။ မင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားရုပ်သေးတွေကိုမင်းရဲ့ဘ ၀ ကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ပြုလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုငါတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ပါပြီ။ ဤဆောင်းပါး၌ဖတ်ပါကမုသားအပေါ်အခြေခံပြီးကြောင်းအာရုံစူးစိုက်မှုကိုရဖို့သာ။ ထပ်မံ၍ မဲဆန္ဒပေးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားနောက်ထပ်ပိတ်ဆို့ခြင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။
ကျွန်ုပ်သည်ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်မလိုသော်လည်းကာကွယ်ဆေးမထိုးပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုရှာဖွေရန်သဘာဝသို့ပြန်သွားရမည်ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုပင်လျှင်ချိတ်ဆက်ရန်တောသို့သွားခဲ့ရသည်။ မင်းကယေရှုကိုယုံရမယ်လို့ငါမပြောဘူး၊
15 မှ 2020 မေလ 06: 30
15 မှ 2020 မေလ 06: 59
ယခင်လင့်ခ်မှဂျာမန်ဆရာဝန်၏ဗွီဒီယိုတွင်သူမကအမှန်အကန်အမှန်ကိုပြောခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန်ပုံမှန်အခြေအနေသို့ပြန်မသွားသင့်ဟုပြောခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ သူမကပြောကြားခဲ့သည်။ ဒါကဒါအမှန်ပဲ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟောင်းနွမ်းဟောင်းကပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိအခြေအနေကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဆိုလိုတယ်။ ထို့ကြောင့် ၁.၅ မီတာရှိသောလူ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်သည့်စောင့်ကြည့်နည်းစနစ်များဖြင့်သာပုံမှန်လိုအပ်ချက်အသစ်တစ်ခုပေါ်လာသည်။ သို့သော်ပုံမှန်အသစ်လိုအပ်ချက်သည်မာတင်၏ FVVD အချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီ FVVD ၏မက်ဆေ့ခ်ျကိုတွင်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်?
15 မှ 2020 မေလ 09: 48
15 မှ 2020 မေလ 08: 18
အနည်းဆုံးငါ့အဘို့ "ရိုင်းသို့" ။ ကျွန်မတို့ဟာအပြည့်အ ၀ ၀ တ်မှုန်ဝါးတဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်လာတာနဲ့အမျှကျွန်မရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုပ်ပြီးငါထွက်သွားပြီ။ ကျွန်ုပ်၏လွတ်လပ်ခွင့်များကိုပယ်ရှားခွင့်ပြုခြင်းထက်ဘယ်နေရာမျှအလယ်၌သေခြင်း၌အစာငတ်လိုသည်။
15 မှ 2020 မေလ 09: 47
ရဲတပ်ဖွဲ့အပြည့်အဝရှိသည့်အချိန်တွင်သင်သွားနိုင်သည်ဟုမထင်ပါ။ Police state = ပဒေသရာဇ်စနစ်, သင်ပြည်နယ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပဒေသရာဇ်စနစ်တွင်ကျွန်သည်ပိုင်ရှင် / ပြည်နယ်၏ခွင့်ပြုချက်မရဘဲမည်သည့်အရာကိုမဆို ပြုလုပ်၍ မရသင့်။
ထို့အပြင်အရာရာတိုင်းကိုသင်မည်သည့်နေရာတွင်သွားလိုသည်ကိုနိုင်ငံတကာမှဆက်သွယ်သည်၊ ညှိနှိုင်း။ ထိန်းချုပ်သည်။ မင်းသွားချင်တဲ့ဒေသခံတွေကမင်းကိုစောင့်နေတာလားလို့ငါတွေးမိတယ်။ တစ် ဦး ချင်းစီအကြားပြိုင်ဆိုင်မှုလည်းရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတဲ့အတွက်ဒီနေရာကို Madurodam မှာကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဖြေရှင်းရမယ်။ ယေဘုယျလူ ဦး ရေနေဆဲထာဝရ passive နှောင့်နှေးနှင့်အတူကနားလည်မထားဘူး။
16 မှ 2020 မေလ 10: 51
မာတင်ဒီမှာသင်ဟာရှုပ်ထွေးမှုအားလုံးနှင့်အထူးသဖြင့် chimeric အကျိုးသက်ရောက်မှုမှန်၏။
Coronavirus ကာကွယ်ဆေးမူပိုင်ခွင့် https://patents.justia.com/patent/10130701 Attenuated Coronavirus ကိုကာကွယ်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုရန်။ Chimera ပရိုတိန်းမူပိုင်ခွင့် https://patents.justia.com/patent/8828407 Chimera ခြင်္သေ့ခေါင်း၊ ဆိတ်ကိုယ်ခန္ဓာ၊ နဂါးအမြီး“ She-Goat” စာသားကိုဆိုလိုသည်မှာဆောင်းရာသီရာသီဖြစ်ပြီး Capricornus of Saturnian ဆိတ်ဖြစ်သည်။ Chimera သည်အခြားတိရိစ္ဆာန်များမှဖန်တီးထားသောသေစေနိုင်သောတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်သည်။
ထိုအခါအောက်ဆုံးအပိုင်းအစ Freemasons ၏သွန်သင်ချက်နှင့်၎င်းတို့၏ newspeak ကနေဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းဆိုရသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလျင်အမြန်တုံ့ပြန်ရန်လိုသည်။ ဒါကြောင့်သင်ကတစ်စုံတစ် ဦး ကတံဆိပ်၏စာသားကနေရနိုင်အဘယ်အရာကိုမြင်။ ဒါကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အရာတွေကိုရိုးရိုးလေးပြောရရင်သူတို့ကမင်းကိုသတ်ချင်ပြီးသူတို့အတွက်ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုဖန်တီးချင်ကြတယ်။ ငရဲမည်မျှဤမျှများစွာသောလူသည်ဤအယူဝါဒပူးပေါင်းခဲ့သည်။
အဆိုပါ Invidual တစ်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုနှင့်အတူမျက်နှာချင်းဆိုင်လာမယ့်အားဖြင့်မသန်မစွမ်းဖြစ်ပါတယ်။
Sodomite, Pedophille, 33 Freemason ။ J ကို Edgar ဟူးဗား
သူသည်ကာကွယ်ဆေးပြုလုပ်သူဂိလဒ်အကြောင်းလည်းပြောခဲ့သည်။ အဘယ်အရာကိုဟီဘရူးအတွက် Galeed ကိုဆိုလိုတာပါ။
hebrew ရှိ Galeed နှင့်တူညီသော chaldee အမည်နှင့်ညီမျှသောသက်သေခံစာစုကိုဖတ်ပါ။ နှစ် ဦး စလုံးပtheိညာဉ်၏မြင်ကွင်းတစ်ခု marking ။ ယာကုပ်နှင့်အလုပ်သမား ၃၁:၄၇ အကြား (ဤအရာသည်တစ်စုံတစ် ဦး အားသမ္မာကျမ်းစာသို့မရောက်စေရန်ညွှန်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ )
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis ကစွယ်စုံကျမ်း Laudato si (သင်ကြားရေးစာတမ်း) သည်လူပေါင်း ၆ ဘီလီယံအားသတ်ဖြတ်ရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။
ရှင်းပြချက်ကိုကြည့်ပါ - သူတို့အကောင်အထည်ဖော်ချင်တာကဘာလဲ။ Trump လည်းသေပြီဖတ်လူတိုင်းကာကွယ်ဆေးထိုးရန်စစ်တပ်အတွက်တောင်းဆိုနေတာခံရဖို့ပုံရသည်။ ထို့အပြင်ပုဂ္ဂလိကလက်နက်သန်း ၄၀၀ ရှိသောအမေရိကန်သည်လည်းတိတ်ဆိတ်စွာထိုင်နေလိမ့်မည်။ သငျသညျဤမျှအေးစက်ရနိုင်ထူးထူးဆန်းဆန်း။ ထိုအခါငါအကြမ်းဖက်မှုထောက်ခံကြဘူး။ ဒါပေမယ့်ပုံမှန်သံသယရှိသူဆက်ဆက်လုပ်ပါ။
17 မှ 2020 မေလ 12: 21
ငါ DNA DNA databases ကိုဖြည့်နိုင်သကဲ့သို့ငါလည်းထိုစမ်းသပ်မှုငြင်းဆန်လိမ့်မယ်။ Die Schippers သည် DSM တွင်ရောက်ရှိနေပြီး DSM Sijbesma အကြီးအကဲသည်ယခုအခါစမ်းသပ်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ယုန်များပြေးနေသည်ကိုစောင့်ကြည့်ပါ၊ ပုံမှန်သံသယရှိသူနှစ်ဖက်စလုံးမှကစားသည်။ နိုးပါ။
17 မှ 2020 မေလ 18: 21
သူမမှာစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောသူငယ်ချင်းများစက်ဝိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ၁၃.၃၃ မိနစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရတာလည်းအလွန်တော်ပါတယ်။ ဒီအကျပ်အတည်းကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေတယ်ဆိုတာဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်သလဲ။ ကျွန်တွေဘယ်လောက်ချိုတယ်။ ကံမကောင်းစွာကျွန်များသည်မကြာခဏသြတ္တပ္ပစိတ်ရှိသူများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့အားသရုပ်ဆောင်များကိုမပြောနိုင်ပါ။
17 မှ 2020 မေလ 14: 29
Madagascar ဥက္ကဌ - WHO သည်အဆိပ် COVID-20 Cure အားဒေါ်လာ ၂၀ မီလီယံလာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုပေးခဲ့သည်
GreatGameIndia မှမေလ ၁၆ ရက်၊
တုန်လှုပ်စေသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်ခုတွင်မာဒါဂက်စကာ၏ဥက္ကthe္ဌက WHO က COVID-20 ကုသမှုအားအဆိပ်သင့်ရန်ဒေါ်လာသန်း ၂၀ လျော်ကြေးပေးရန် WHO ကစိတ်လှုပ်ရှားစွာပြောဆိုခဲ့သည်။ Artemisia မှပြုလုပ်သော COVID-19 Organics ဟုခေါ်သည့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များသည်ဆယ်ရက်အတွင်း COVID-19 လူနာများကိုကုသနိုင်သည်။
18 မှ 2020 မေလ 13: 33
နိုင်ဂျီးရီးယားတွင်လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုစွပ်စွဲချက်များအရ billy goates ဖောင်ဒေးရှင်းသည်မှန်ဘီလူးအောက်တွင်ရှိသည်။ ဘူရွန်ဒီနှင့်တန်ဇန်းနီးယားနိုင်ငံတို့သည် WHO / melinda နှင့်ငွေတောင်းခံလွှာများကိုထုတ်ပစ်လိုက်သည်။ ဒါဆိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒီမှာဥပမာတစ်ခုယူလို့ရတယ်။
18 မှ 2020 မေလ 18: 05
ငါ BMF မှာအံ့သြဖို့ဆက်လက်။ အထူးသဖြင့်သွားနှင့်လက်သည်းတို့ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သူများစွာရှိသည်။ သူကပရဟိတလုပ်ငန်းတွေအများကြီးပေးတယ်။ သူကအနည်းဆုံး 80% ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာပြုနေစဉ်။ အကယ်၍ ဘီလ်ကတကယ်ချိုမြိန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူနဲ့သူ့သူငယ်ချင်းတွေဟာကမ္ဘာကိုအစာခေါင်းပါးခြင်းနှင့်ရေငတ်ခြင်းမှနှစ်ပေါင်းများစွာကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။ သူ၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်စမ်းသပ်ခွဲဝေခြင်းနှင့်ခွဲဝေခြင်းများပြုလုပ်မည့်အစား။ သူကမစမ်းသပ်ဘူး၊ ပြီးတော့လူတွေကိုစမ်းသပ်တိရိစ္ဆာန်တွေအဖြစ်သုံးတယ်။ ပြည်သူ့နေဆဲထွက်မတ်တပ်ရပ်သင့်ပါတယ်။ သူတို့မှာငွေတွေများများစားစားရှိပြီးတစ်ပတ်အတွင်းကမ္ဘာပေါ်ရှိဆင်းရဲဒုက္ခအားလုံးကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။ ကလေးသူငယ်သေဆုံးမှုစသည်တို့စသည်တို့ဖြစ်သည်။ သို့သော်သူတို့သည်ထိုသို့မလုပ်နိုင်ပါ၊ ထို့ကြောင့် BMF တစ်ခုလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာမျှမကောင်းမွန်ပါ။ ကံမကောင်းဆုံးငွေအများဆုံးနှင့်အတူနိမ့်ဆုံးမျိုးကိုကြိုး။
20 မှ 2020 မေလ 08: 46
ပြIVနာမရှိသောကြောင့် RIVM သည်ထို Imperial ကောလိပ်မော်ဒယ်များကိုထိုအတောအတွင်းထုတ်ပစ်လိုက်ခြင်းလားကျွန်ုပ်တွေးမိသည်။ အစီအစဉ်တစ်ခုအားပံ့ပိုးရန်အတွက်၎င်းသည်လုပ်ကြံထားသောအချက်အလက်များဖြစ်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားပင်။
Corona-Modellierung စစ်“ schlimmster Software-Fehler aller Zeiten”
ဆောင်းပါး - Benachrichtigung über neue
Politik Corona ဗိုင်းရပ်စ်
Coron-Epidemie သည်အင်ဒီယာကောလိပ်၏အင်ဒီယယ်ကောလိပ်၏ပုံစံ၊ ကြီးမားသောဆော့ဝဲလ်ပရိုဂရမ်များဖြစ်သောဆော့ဝဲလ် -Fehler ကိုအသုံးပြုသည်။
20 မှ 2020 မေလ 10: 46
သင်ရူးနေသလား၊ ထိုမော်ဒယ်များသည် "IT WOBBLES" ကိုလွှင့်ပစ်ရန်အလွန်ကောင်းသော
RIVM: ၀.၇ မှ ၁ အတွင်းအကြားနံပါတ် 'wobbles'
20 မှ 2020 မေလ 13: 42
hahahaha တိတိကျကျဖြစ်ဖို့ Wuhan Wiggle idd ။
23 မှ 2020 မေလ 15: 43
« အဆိုပါ Corona အကျပ်အတည်းကာလအတွင်းပိုက်ဆံ၏ကြီးမားတန်ဖိုးလျော့ပါးငွေဖောင်းပွမှုမှ ဦး ဆောင်: အ Bitcoin ဖြေရှင်းချက်လား
အစိုးရရေးရာများအပေါ်နှောင်ကြိုး Jordi Zwarts သည်တန်ချိန်များစွာရှိသော်လည်းမည်သည့်အရာမျှမရရှိပါ »
Maurice de Hond ကမီတာတစ်ဝက်ခွဲသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ထားသည် (ဗီဒီယို)
တရုတ်ကို ဦး တည်သော Trump ၏တင်းကြပ်သောဒေါ်လာသည်ကျဆုံးခြင်းနှင့်စီးပွားရေးပြိုလဲခြင်းအစလော။
ကင်မရာ2op Maurice de Hond ကမီတာတစ်ဝက်ခွဲသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ထားသည် (ဗီဒီယို)
သုံးသပ်ကြည့်ရှု op Corona အကျပ်အတည်းကာလအတွင်းဒတ်ခ်ျလူမျိုးများမည်မျှငွေပေးချေနိုင်သေးသနည်း။
Riffian op Covid-19 ကာကွယ်ဆေးကိုမဖြစ်မနေလိုအပ်ပါကသင်သောက်သင့်သလားသို့မဟုတ်ငြင်းဆန်သင့်သလား။ ဘာလုပ်မလဲ?
Zonnetje op Maurice de Hond ကမီတာတစ်ဝက်ခွဲသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ထားသည် (ဗီဒီယို)
အဘယ်ကြောင့်သင်သိချင်ပါသလဲ? op Maurice de Hond ကမီတာတစ်ဝက်ခွဲသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ထားသည် (ဗီဒီယို)